I-Aquitaine: owina inoveli yomlando yomklomelo wePlanethi 2020 | Izincwadi Zamanje
I-Aquitania yincwadi yakamuva yombhali othengisa kakhulu eSpain: Eva García Sáenz de Urturi. Ishicilelwe ngo-2020, iyinoveli eqanjiwe yangezikhathi zasendulo, umlingiswa wayo oyinhloko u-Eleonor wase-Aquitaine - owaziwa nangokuthi u-Eleanor - ozokwenza konke okusemandleni ukuthola ukuthi yini imbangela yokubulawa kukayise, uDuke Guilhèm X wasePeitieus.
Isakhiwo sizungezwe ama-enigmas, ama-sigil, impindiselo ngisho nezihlobo. Njengokungathi kunomdlalo wezihlalo zobukhosi, kuzoba nezimpi eziningi kule ndaba, equkethe ne-trio enothando. Ngale ncwadi umbhali uzisungule emkhakheni wezemibhalo, iqiniso eliqinisekisile ngokuthola umklomelo wePlanethi ngo-2020.
1 Isifinyezo i-Aquitaine (2020)
1.1 Ukufa okuyindida
1.2 Icebo lokuziphindiselela
1.3 Ukujika okungalindelekile
2 Ukuhlaziywa kwe-Aquitaine (2020)
2.3 Ukulungiswa kwenoveli
3.1 Izifundo nolwazi lomsebenzi
3.2 Umjaho wezincwadi
3.3 Izincwadi zika-Eva García Sáenz de Urturi
Isifingqo I-Aquitania (2020)
e 1.137, UGuilhèm X, "UMbusi wase-Aquitaine", kuze kufike eCompostela ngemuva kohambo olude. Ukufika phambi kwe-altare elikhulu le-cathedral, ngokungalindelekile uwa afe. Isikhumba sakho -ini uphenduka ube luhlaza okwesibhakabhaka- ibhalwe "ukhozi lwegazi", ukuhlukunyezwa kwasendulo okusetshenziswe eNormandy. Bonke ababona lokho bashaqekile ngokufa okungaqondakali komholi.
Omunye wabantu abathintekayo kakhulu ngu indodakazi yakhe: iDuchess Eleanor, i-WHO, con nje iminyaka 13, kumele athathe umbuso. Her kugomela lokho ubaba wakhe wabulawa ngabaseCapetian (izihlobo zeNkosi uLuy VI waseFrance), ngenxa yezintshisakalo zabo ezinkulu emazweni ase-Aquitaine.
Ngenxa yakho konke okwenzekile, indlalifa yesihlalo sobukhosi yakha uhlelo olubandayo lokuziphindiselela oluzofuna ukungena ngalo embusweni waseFrance futhi lithole ukwethenjwa kwalo. Ukufeza injongo yayo, intokazi izokokotela intando kayise. Idokhumenti izokhombisa njengentando yombusi umshado wendodakazi yakhe y iNkosi Yengane (Luy VII), indodana yeNkosi uLuy VI waseFrance.
Ngaphambi kokuqala ubuqili bakhe, abakwaDuchess bazovuma konke okuhlelwe kumpristi osemncane, ogcina ubunikazi obungalindelekile.
ULeonor uhamba aze afike naye inkosi uLuy VI waseFrance, eyaziwa njenge "Fat King". Lokhu, ngokushesha, uhlela umshado phakathi kukaduchess nendodana yakhe. Ngesikhathi sedili lomcimbi, ngokuzumayo, Inkosi uwa efile, ezimweni ezifanayo nezikaGuilhèm X. Lokhu kuqeda izinsolo zikaLeonor, manje okumele ahole iFrance nentsha uLuy.
Bobabili izokwethula uphenyo olukhungathekisayo ngokufa okungajwayelekile kulawa madoda abalulekile. Kwalokhu, bazophendukela kumakati e-Aquitaine, Los izinhloli ezidumile yezikhulu. Amakhosi amancane nangenalwazi azodlula ezimeni eziningi. Kulolu hambo, umfana - owashiywa ehlathini emashumini eminyaka adlule - uzodlala indima ebonakalayo.
I-Análisis I-Aquitania (2020)
Kuyinto a inoveli yomlando kulekelelwa ngenganekwane, setha ikakhulukazi endaweni yaseFrance. Kwezabo I-416 páginas, izici zokulandisa Izingxenye ezine, ithuthukiswe ngokulandelana Izahluko ezimfishane ezingama-64. Umsebenzi unezinhlobo ezimbili zokulandisa: kuqala umuntu, nguLeonor noLuy; y en umuntu wesithathu, ngumlandeli owazi konke.
I-Basque Literat kuboniswe iminyaka eyishumi empilweni ka-Eleanor we-Aquitaine, owesifazane onomlando ongavamile - weza ukuhola imibuso emithathu ebalulekile yaseYurophu. Itulo ligcwalisa imfihlakalo yokufa kwabantu wezibalo ezimbili ezibalulekile zesikhathi ngamaqiniso aqanjiwe. Ngokwengeziwe, ungena kwezinye izingqinamba zomuntu siqu nezangaphandle ezinikeza indaba ama-nuances ahlukahlukene.
U-Eva uzakhele udumo olukhulu ngamanoveli akhe omlando; okokuqala, ngekhwalithi yokulandisa; okwesibili, ngokulungiselela akwenzayo ngaphambi nangesikhathi kulungiselelwa izincwadi zakhe. Ekupheleni kwesakhiwo se- I-Aquitania, umbhali unikezela amakhasi amaningana ukuchaza imibhalo eningiliziwe. Kuzo, uthi ufunde izincwadi ezingaphezu kwekhulu nemininingwane ngohambo lwakhe lokuya endaweni eyake yaba indawo yase-Aquitaine.
Kulolu hambo wavakashela eBordeaux, ePoitiers nase-Abbey yaseFontevrault, lapho u-Eleonor wase-Aquitaine ashonela khona wangcwatshwa. Lapho waphenya ngamasiko nokudla kwangesikhathi, engeze ukunikeza le ndaba iqiniso elingaphezulu. Wabuye wathatha inkambo yokukhanyisa, lapho afunda khona ngobuciko obusetshenziswa izindela ukwenza imibhalo yesandla yasendulo.
USáenz de Urturi ungeze i- iqembu elikhulu labalingiswa kunoveli - okwangempela, ingxenye enkulu. Phuma, ngezizathu ezisobala, abalingisi bayo: ULeonor noLuy; Kodwa-ke, umbhali akazange azishiye nakancane izinhlamvu zesibili, kepha wabapha isakhiwo esihle kakhulu namathempeli achazwe kahle. Phakathi kokugcina ivelele: URaymond de Poitiers Umalume womuntu ophikisana naye—, "Ingane", u-Adamar noGaleran.
I-Aquitania yinoveli ukuthi ha kubangele isiyaluyalu impela, kuze kube sezingeni lokucatshangelwa into ebhaliwe. Kodwa-ke, njenganoma yimuphi umsebenzi, inabahluzi bayo, abathi okuningi kokuqukethwe komlando akukho. Njengamanje, umbhalo uvunyelwe ngama-72% ngabafundi kuwebhu.
Ukubuyekezwa kwayo kwe-Amazon okungu-5.807 kukubeka kufayela le- Indawo yokuqala ekuthengisweni esigabeni Sezincwadi ZaseFrance. Iningi labasebenzisi liyilinganisela ngesisindo esiphezulu, ngesilinganiso esingu-4,2 / 5. Kumele kuqashelwe ukuthi ama-48% anikeze izinkanyezi ezi-5 emsebenzini, futhi ngu-14% kuphela onikeze izinkanyezi ezi-3 noma ngaphansi.
U-Eva García Sáenz de Urturi wazalwa ngo-Agasti 20, 1972 eVitoria, enye yezindawo ezinhle kakhulu zasendulo ezweni laseBasque; indodakazi yommeli kanye nothisha. Uhlale waze waba neminyaka eyi-15 edolobheni lakubo, ukuze ethuthele nomndeni wakhe kamuva e-Alicante, idolobha ohlala kulo njengamanje.
Ukucaphuna kuka-Eva García Sáenz.
Kubo bobabili ubuntwana nobusha bakhe, wayebonakala ngokuba ngumfundi okhuthele. Kusukela eneminyaka engu-14 waqala ukubhala, lokhu kubonga ithonya lokuthi ngubani owayenguprofesa wakhe wezincwadi esikoleni saseSan Viator. Ngemuva kwesikhathi, uthathe izifundo zemibhalo yenoveli yokudala ezikhungweni ezibalulekile zaseSpain. Ngaleso sikhathi, wabhala izindaba ezimfushane eziningana awina ngazo imincintiswano ethile.
Ngokomsebenzi, wafunda iziqu ze-Optics ne-Optometry, ngenkathi enza lo msebenzi - eneminyaka engama-27 - wakwazi ukuqhuba inkampani yamazwe amaningi. Ngemuva kweminyaka eyi-10 kulo mkhakha, waqala ukusebenza e-University of Alicante. Kusukela ngo-2009 ubuyele ezincwadini; Ngichithe ubusuku ngicwaninga futhi ngibhala imigqa embalwa okwakuzoba yincwadi yakhe yokuqala eminyakeni emithathu kamuva.
e 2012, umbhali waseBasque kuzishicilele inoveli yakhe yokuqala emsamo Ama-Amazon: Isaga sempilo ende: umndeni wakudala. Lokhu kulandisa okungokomlando kudonse ukunakekela kwezinkulungwane zabalandeli, okwathi kubangelwe okwamanje isiphithiphithi esikhulu semibhalo. Ngo-2014, waqeda i-biology nge: Amadodana ka-Adam futhi wethula incwadi yakhe yesithathu: Indlela eya eTahiti; ngemuva kokuphumelela kwabo bobabili, wanquma ukuzinikela ngokuphelele ezincwadini.
Ngo-2016 wakhipha i- I-White City Trilogy, uchungechunge umlobi wezincwadi azuze ngalo izigidi zabafundi nokuthi wamthatha ukuba ngumbhali okuhamba phambili. Ngemuva kweminyaka emine, incwadi yokuqala ochungechungeni: Ukuthula komlungu, yaguqulelwa indawo yesinema nguDaniel Calparsoro. Ngemuva kwesikhathi eside sokusebenza kanzima nemibhalo, wethule inoveli yakhe yakamuva: I-Aquitania (2020).
Izincwadi zika-Eva García Sáenz de Urturi
ISaga Sokuphila Isikhathi Eside I: Umndeni Omdala (2012)
I-Saga ye-II eyaphila isikhathi eside: Amadodana ka-Adam (2014)
Indlela eya eTahiti (2014)
I-White City Trilogy I: Ukuthula Kwe-White City (2016)
I-White City Trilogy II: Imikhosi Yamanzi (2017)
I-White City Trilogy III: Isikhathi seNkosi (2018)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » I-Aquitania